PressReader - Ilanga langeSonto: 2019-01-06 - OBEHLUSHWA AMEHLO UGILE IZIMANGA
OBEHLUSHWA AMEHLO UGILE IZIMANGA
Ilanga langeSonto - 2019-01-06 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE
AKUZANGE kumqede umdlandla ukuphathwa ngamehlo unyaka wonke, okuholele ukutheni aphazamiseke emikilasini, esalele ezifundweni umfundi ogile izimanga kwamatikuletsheni waze wayohlonishwa ngisho ngungqongqoshe wezemfundo eyisisekelo kuzwelonke, unkk Angie Motshekga.
Ubongumenzi Ndlovu (17) wasezama High School, enewcastle, uthi ubegqigqa kodokotela unyaka wonke, esalela ezifundweni zakhe kodwa lokho kwamnikeza ugqozi lokufeza isifiso sakhe, ejabhise izimfamona.
Uthi okumsize kakhulu ngukuthi ngesikhathi ephasele umatikuletsheni esuka kwagrade-11, uqale ukufunda izincwadi zakhe ngozibandlela (December) ezifundisa yena, kwathi sekuvulwa izikole kwabe sekufana nokuthi useyabuyekeza ngoba ubese ebahambele phambili othisha ngokwesilabhasi.
“Ngo-2017 kuzibandlela amaholide ngawezwa ngendaba, ngangifunda. Nakhu-ke sengihlaselwa ukugula isikhathi eside. Okuningi okufundiswe ngothisha kungishiyile. Ukuzimisela kwami ngifunda ubusuku nemini kungisize kakhulu, ngibacela nothisha bangilekelele nakuba bese ngilahlekelwe yithemba lokuthi ngizowubhala umatikuletsheni ngenxa yawo amehlo,” kusho ubongumenzi.
Lo mfundi uwole inqwaba yezindondo ngolwesihlanu ehlonishwa wuMnyango wezemfundo KwazuluNatal emcimbini obuse ICC ethekwini. Ubongumenzi uthole o-a kuzona zonke izifundo zakhe.
I-physical Science uthole u-100%, Life Orientation 100%, Isizulu 100%, Maths 96%, Life sciences 98%, Geography 94%, English 93%. Uthe usefake izicelo zokuyoqhubeka nemfundo ephakeme enze iziqu zobudokotela University of Cape Town.
Umnu Mthandeni Dlungwana uthe bayaziqhenya ngalo mfundi ngoba ukungena komfundi wesifundazwe ohlwini lwabafundi abahambe phambili kuzwelonke kuyinto enkulu.